Guddoomiyaashii degmooyinka G/Gedo iyo Taliyaal ciidan oo xabsiga la dhigay Muqdishana loo soo wado – Hornafrik Media Network
Guddoomiyaashii degmooyinka G/Gedo iyo Taliyaal ciidan oo xabsiga la dhigay Muqdishana loo soo wado
By Liibaan Nuur	 On Nov 6, 2019
Mas’uuliyiinta kala ah: Guddoomiyaha degmada Luuq Mohamed Cabdullaahi Gardhuub, Guuddomiyaha Beled-Xaawo Cabdicasiis Xareed Abdullaahi, Guddoomiyiha degmada Doolow Bashiir Xasan Cabdullaahi iyo taliyaal ciidan oo ka tirsanaa maamulka Jubbaland oo ay ka mid yihiin, Axmed Ilka-dheere, Jamaal Xasan iyo xubno kale ayey maanta xirxireen ciidamo ka kala tirsan Militeriga Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya.
Maamulada degmooyinkaas ayaa toos u hoos tagi jiray Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii amniga Jubbaland oo haatan u xiran dowladda dhexe, kuna xiran Muqdisho.
Mas’uuliyiinta maanta lagu xiray gobolka Gedo ayaa la sheegay in loo soo qaadayo magaalada Muqdisho, waxaana xarigooda loo adeegsaday Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee qeybta ka ah AMISOM iyo ciidan ka tirsan xoogga dalka oo qaarkood dhawaan la geeyay gobolkaas.
Markii la xirayay xubnahaan waxaa lagu siray in ay shir uga qeyb galayaan magaalo yar oo dhacda xadka ay Soomaaliya la wadaagto Itoobiya, kadib markii ay gaareen halkaasna waa la xirxiray dhamaantood, waxaana ku jira xubnaha qaar ka mid ah guddoomiye ku xigeenadii degmooyinkaas.
Dhinaca kale in ka badan 150 askari oo ka tirsan ciidanka Daraawiishta Jubbaland oo ku sugnaa magaalada Beled-Xaawo ayaa isku dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Ciidamo ka tirsanaa Daraawiishta Jubbaland oo ku biiray xoogga dalka qeybtiisa Gedo
Ciidanka Filibiin oo toogasho ku dilay koox doonaysay inay geysato weerar isqarxin ah